गाउँ–गाउँ फिँजिदै कोरोना
प्रदेशमा नं ५ मा रहेका अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र अस्पतालको अभावले भयावह अवस्था निम्तिने जोखिम छ। यो देशकै जोखिम क्षेत्रमा पर्छ। यहाँका छ वटै तराईका जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
बर्दियाकी ११ वर्षीया बालिकामा कोरोना संक्रमण भेटियो। संक्रमण भएपछि उनलाई आइसोलेसनमा राख्नका निम्ति चिकित्सकले दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा पठाए। तर, दाङ प्रशासनले रोक लगायो। संक्रमित बालिका तीन दिनपछि मात्रै अस्पतालमा पुगिन्।
भारतको मुम्बईबाट एक साता लामो यात्रापछि नेपाल भित्रिएका बाँकेको नरैनापुरका २५ वर्षीय युवक गाउँकै क्वारेन्टिनमा थिए। वैशाख ३० गते नेपाल आई ३१ गते क्वारेन्टिनस्थल पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेको तीन दिनपछि मात्रै उनको स्वाब संकलन भयो। कोरोना रिपोर्ट कुरिरहेका उनले क्वारेन्टिनमै अन्तिम सास फेरे। उनलाई लगातार बान्ता भएको थियो। ज्वरोले छटपटाएका उनलाई औषधि र पानी दिने पनि कोही भएन। मृत्युपछि कोरोना संक्रमण भएको रिपोर्ट आयो।
यी प्रदेश ५ मा पछिल्लो साताका मुख्य घटना हुन्। यी दुई घटनाले नै सरकारले कोरानाविरुद्धको तयारी कस्तो र कसरी गरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। बाँकेका युवकले उपचार नपाई ज्यान गुमाउनु र संक्रमितलाई आइसोलेसन बेडसमेत तत्काल उपलब्ध नहुनुले तयारी निकै फितलो छ भन्ने बुझिन्छ। सर्वसाधारणको एउटै माग छ– ‘संक्रमित भएको थाहा नपाउँदै मर्नु नपरोस्।’
प्रदेशमा रहेका अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र अस्पतालको अभावले भयावह अवस्था निम्तिने जोखिम छ। प्रदेश ५ मुलुककै जोखिम क्षेत्रमा पर्छ। यहाँका छ वटै तराईका जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म संक्रमितको संख्या १ सय ५९ पुगेको छ।
भारतबाट आएका करिब ११ हजार नेपाली क्वारेन्टिनमा छन्। उनीहरू सबैको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्छ। अहिले प्रदेशमा परीक्षणको गति हेर्दा यी व्यक्तिको परीक्षण गर्न महिनौँ लाग्ने देखिन्छ।
हेलचेक्य्राइँले फैलिँदो कोरोना
प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी संक्रमित कपिलवस्तुमा छन्। एक सातामै ४२ जना संक्रमित भए। चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीसमेत कोरोनाको शिकार बनेका छन्। त्यहाँ कोरोना महामारीविरुद्ध पर्याप्त तयारी नहुँदा खतरनाक अवस्था सिर्जना भएको छ। भारतबाट करिब आठ हजार नागरिक भित्रिएका थिए। तिनलाई राख्ने क्वारेन्टिन नहुँदा कोरोना गाउँगाउँमा फैलिएको छ।
तीन तहकै सरकारको लापर्बाही र व्यक्तिगत हेलचेक्य्राइँले कोरोना फैलिँदै गएको छ। भारतबाट आएका नागरिकमा मात्रै सीमित रहेको कोरोना अब कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र घरमै बसिरहेका बालबालिकासम्म पुगेको छ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका शाखा अधिकृत कोरोनाबाट संक्रमित भए। सोही नगरपालिकामा कार्यरत सरसफाइकर्मीको नतिजा पोजिटिभ छ। यी दुईमा संक्रमण देखिएपछि कोरोना गाउँगाउँमा पुगेको अनुमान गरिएको छ। किनभने, अधिकृत राहत वितरण र अन्य कामका लागि गाउँगाउँ डुलेका छन्।
कर्मचारीसँगै चार जना सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण छ। व्यक्तिगत लापर्बाही र लकडाउन उल्लंघनको परिणाम देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षाका उपकरण छैनन्। सामान्य मास्ककै भरमा सीमामा खटिएका छन्। सुरक्षित रहन सक्ने अधिकृत स्तरका कर्मचारीमा भने लापर्बाही देखिन्छ। असावधान हुँदा नर्समा समेत कोरोना संक्रमण भएको बताइएको छ। व्यक्तिगत सुरक्षण उपकरण नहुनु र सामान्य सावधानी नअपनाउँदा कोरोना फैलिएको जानकारहरू बताउँछन्।
चार जना सुरक्षाकर्मी कार्यालय र सीमानाकामा परिचालित थिए। कृष्णनगरमै कार्यरत प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धानका जुनियर अधिकृतमा पनि कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ।
नगरपालिकाका शाखा अधिकृत भारतबाट आएका भाइ पर्नेलाई भेट्न गएका थिए। त्यहीँबाट कोरोना सरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको कृष्णनगरका मेयर रजतप्रताप शाहले बताए। उनै अधिकृतसँग मेयर र सबै वडाध्यक्षहरूको भेटघाट भएको थियो। उनी कार्यालयमै आएर काम गरेका थिए।
कृष्णनगर नगरपालिकाका अन्य तीन जना स्थानीय बासिन्दा पनि संक्रमित छन्। प्रहरी नै संक्रमित भएपछि ब्यारेक नै जोखिममा छ। सफाइकर्मी भने क्वारेन्टिनमै काम गरिरहेकाले सरेको अनुमान गरिएको छ। एक जना छ वर्षीया बालिकामा समेत कोरोना देखिएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत उनमा कोरोना देखिएको हो। गाउँमै रहँदा वा अस्पतालमा स¥यो, निक्र्याेल भएको छैन। ‘स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दामा समेत कोरोना देखिएपछि अवस्था भयावह भइसकेको छ,’ मेयर शाह भन्छन्।
संक्रमितहरूका सम्पर्कमा आएकाको ट्रेसिङ भइरहेको छ। तर, भारतबाट आउने र गाउँमा बस्नेको खोजीमा विलम्ब गरिएको छ। जनशक्ति पनि कम छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका सबैको चेकजाँच र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन झन् जटिल भएकाले कोरोना संक्रमण उच्च दरमा हुने आकलन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलका अनुसार भारतबाट आउनेलाई जुन पालिका घर भएका हुन्, त्यहीँको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ।
संक्रमणको दर उच्च भएकाले कपिलवस्तुमा छुट्टै स्वास्थ्यकर्मीको युनिट आवश्यक हुने र परीक्षणसमेत त्यहीँ गर्नुपर्ने माग भएको छ। स्थानीय सरकार क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खटिएका छन्। तर, प्रदेश र संघीय सरकारले महामारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
तयारी नै कमजोर
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल कोरोनाको पूर्वतयारी बैठकमा बोल्दै अहिले हतार गर्न आवश्यक नभएको भन्दै पन्छिरहेका थिए। ‘उनै पन्छिरहने व्यक्ति स्वास्थ्यको नेतृत्वमा छन्,’ एक जना कर्मचारीले भने, ‘मन्त्री नै तयारीमा उदासीन भएपछि अवस्था खतरनाक हुने नै भयो। जनताले पनि कसरी मन बुझाऊन्, अस्पतालमा बेड छैन, सरकारसँग देखभेट छैन।’
चिकित्सकहरूले बारम्बार तयारी बलियो हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। पर्याप्त तयारी भएन। अब भने प्रदेश ५ लाई सकस छ। दुई सातामै कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय ५ पुगेको छ। सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमित यहीँ छन्।
संक्रमित बढेपछि आइसोलेन अस्पतालका बेड करिब सकिएका छन्। क्वारेन्टिनस्थल छँदै छैनन्। संक्रमितलाई विद्यालयका भवनमा असुरक्षित तरिकाले राखिएको छ, जसले कोरोना सर्ने जोखिम बढाएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापा संक्रमण दर रोक्नका लागि परीक्षण दर बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘परीक्षण बढाए मात्रै समाजमा फैलिने डर कम हुन्छ,’ डा. थापा भन्छन्।
भारतबाट आउनेको संख्या मात्रै पछिल्लो समय हजारौँ छ। यी सबैको परीक्षण आवश्यक छ। प्रदेशका तीन शहर भैरहवा, घोराही र नेपालगञ्जमा कोरोना परीक्षण ल्याब छ। तर, परीक्षण गति निकै सुस्त छ।
बल्ल अस्पताल बनाइँदै
कोरोना संक्रमित थपिएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले आइसोलेसन बेड थप्दै छ। बुटवलको कोरोना विशेष अस्पताल भरिसकेको छ। अब त्यहाँ २ सय ५० बेड थप्ने योजना छ। बाँकेमा सेनाको अस्पताललाई आइसोलेसन स्थल बनाइँदै छ। भैरहवाको भीम अस्पतालमा सय बेड थप्ने तयारी छ। तर, यी काम कहिले सुरु हुन्छन् भन्ने अन्योल छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरी पूर्वाधार थप्ने काम सुरु भएको बताउँछन्। ‘सरकारले तराईका छ वटै जिल्लामा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन थप्ने तयारी थालेको छ,’ डा. चौधरी भन्छन्।